Ciidamo lagu sheegay Police oo maanta loo daabullay Baydhabo – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Ciidamo lagu sheegay Police oo maanta loo daabullay Baydhabo
Allhadaaftimo November 30, 2018 December 1, 2018 Uncategorized
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ah oo laga soo doortay Koofur Galbeed ayaa qeyla dhaan ka soo saaray Ciidamo maanta laga dejiyay magaalada Baydhabo, kuwaasoo laga diray magaalada Muqdisho.
Xildhibaano uu hormuud u yahay Sheekh Aadan Madoobe oo shir jaraa’id ku qabtay Baydhabo ayaa sheegay in ciidamadan la keenay Baydhabo ay halis ku yihiin amniga, isagoo ugu baaqay dowladda federaalka inay dib u celiso.
“Waleeg dowladda Federaalka labo askari xataa uma soo dirin, maanta oo doorasho nabadgelyo ku socoto ay ka dhaceyso miyaa ciidan loo soo dirayaa, Cadawga ciidan looma soo dirin, shacabka ayaa ciidamo loo soo diray waa arrin is weydiin mudan”ayuu yiri Sheekh Aadan Madoobe.
Sheekh Aadan Madoobe ayaa ugu baaqay Madaxda dowladda in aysan dalka cuqubo ka gelin oo aanay gacantooda ku dimin, isagoo xusay inay ka soo horjeedaan in wax lagu qasbay shacabka in la sameeyo.
Xaalad ayaaka dhalatay Ciidamo Boolis ah oo maanta laga dejiyay Baydhabo, iyadoo ciidamadaas laga diray magaalada Muqdisho, la qorsheynayo inay ka qeyb qaataan sugida amniga doorashada Koofur Galbeed, balse waxaa jira walaac laga qabo in ciidankaas ay arrimo siyaasadeed ku lug yeeshaan.
Waxaan xog ku helay in ciidanka lagu sheegay in ay Boolis yihiin ee saakay Badhabo loo daabulay ay yihiin kuwii soo weeraray 17 December e sanadkii hore , hoygayga C/Rahman Abdi shakuur kuwaasoo dilay 5 wiil oo ilaaladayda ahayd, xabaal wadareedna ku aasay. Keliya waxaa laga bedelay magacii iyo dharkii NISA oo waxaa loo geliyey dhar Booliska. Shaki iigama jiro in ay fidno iyo fadqalalo ay Baydhabo ka abuurayaan. Sanad ka hor ayaan shacabka uga dignay ujeedka kooxda Villa Somalia. Waa Ilaaheey mahadii in badan ay haatan soo baraarugeen. Fariinteenu in nacasnimo talinta caynkaan oo kala ah, keliya lagu celin karo awood shacab oo midaysan.
Previous Prof Yaxye Sh.Caamir “Wasiir Beyle Cilmga Beeraha ayuu bartay,Maaliyad Maamulkeeda Ma Uusan barane inuu iscasilaa haboon,
Next Jidwalka Dorashada Puntland
Abdulqadir Jirde Madaxweynaha Somaliland xilka malagga Xayuubinkaraa March 26, 2019
Wafdi uu Hogaminaayey W/arimaha Gudaha Somalia ayaa Gaaray Dhuusamareeb March 26, 2019
Ciidanka Qaranka Somaliland Ee Gobolka Sanaag Oo Soo Dhaweeyey Saraakil Ka Soo Goostay Jabhada Kornayl Caarre March 26, 2019
Madaxweynaha Maraykanka oo qallinka ku duugay in Buuraleyda Golan Heights Israel Qaadato March 25, 2019
WAFTI WASIIRRO IYO XILDHIBAANNO PUNTLAND AH OO GAARAY QARDHO March 25, 2019
Archives Select Month March 2019 (103) February 2019 (95) January 2019 (148) December 2018 (129) November 2018 (99) October 2018 (104) September 2018 (98) August 2018 (98) July 2018 (93) June 2018 (130) May 2018 (124) April 2018 (97) March 2018 (140) February 2018 (93) January 2018 (131) December 2017 (113) November 2017 (95) October 2017 (84) September 2017 (98) August 2017 (121) July 2017 (120) June 2017 (94) May 2017 (119) April 2017 (112) March 2017 (117) February 2017 (139) January 2017 (118) December 2016 (89) November 2016 (114) October 2016 (98) September 2016 (91) August 2016 (95) July 2016 (91) June 2016 (73) May 2016 (68) April 2016 (55) March 2016 (100) February 2016 (67) January 2016 (71) December 2015 (73) November 2015 (58) October 2015 (64) September 2015 (81) August 2015 (60) July 2015 (60) June 2015 (52) May 2015 (43) April 2015 (59) March 2015 (57) February 2015 (62) January 2015 (96) December 2014 (22) November 2014 (69) October 2014 (133) September 2014 (144) August 2014 (38)